600L Plastic Cooler isiqukathi
Izici yomkhiqizo okungenisiwe ukudla grade PE njengoba impahla eluhlaza, sesinyathelo esisodwa umqolo double anesitezi iziqukathi kungaba eziphelele ukusebenza ngaphansi -40 ℃. Acid futhi alikhali nemithi, ezinzima futhi iqine. Ezitholakalayo ngumuntu Jack isandla Pallet kusukela izinhlangothi ezimbili kanye yiloli Forklift bevela kuzo zonke izinhlangothi ezine, stackable. Ibhanga Isicelo a: Ukukhiqizwa kokudla. b: Izinto zokusetshenziswa simisiwe USB. c: lokushisa okuphansi ebandayo yokugcina inzuzo. d: okuphansi lokushisa incibilikiswa imikhiqizo zasemanzini kanye nemikhiqizo inyama. e: Fresh futhi sigodole esiqandisini ...
550L Plastic ice ibhokisi Coolers ngci
65L ice ibhokisi Plastic ngci Coolers
Izici yomkhiqizo okungenisiwe ukudla grade PE njengoba impahla eluhlaza, sesinyathelo esisodwa umqolo double anesitezi iziqukathi kungaba eziphelele ukusebenza ngaphansi -40 ℃. Acid futhi alikhali nemithi, ezinzima futhi iqine. Ezitholakalayo ngumuntu Jack isandla Pallet kusukela izinhlangothi ezimbili kanye yiloli Forklift bevela kuzo zonke izinhlangothi ezine, stackable. Ibhanga Isicelo a: Ukukhiqizwa kokudla. b: Izinto zokusetshenziswa simisiwe USB. c: lokushisa okuphansi ebandayo yokugcina inzuzo. d: okuphansi lokushisa incibilikiswa imikhiqizo zasemanzini kanye nemikhiqizo inyama. e: esiqandisini Fresh futhi sigodole ...
123456Landelayo> >> Page 1 / 51